Syria oo sheegtay in ay kala dambayntii kusoo celisay Jisr al-Shughour. – SBC
Syria oo sheegtay in ay kala dambayntii kusoo celisay Jisr al-Shughour.
Ciidamada Syria waxaa ay xiligan guud ahaan gacanta ku hayaan Magaalada Jisr al-Shughour oo ku taala Waqooyiga dalkaasi,taasi oo maalmihii aynu soo dhaafnay ay dagaalo ku dhex marayeen Ciidamada Syria iyo kooxo hubaysan oo deegaankaasi ku dhuumaalaysanayay,sida uu sheegay sarkaal ka tirsan Ciidamada Amaanka dalkaasi.
Taleefishinka qaranka Syria ayaa sheegay in Magaalada Jisr al-Shughour xiligan xaaladeedu ay tahay mid degen,iyadoona kala dambayntii ay deegaankaasi kusoo noqotay.
In kabadan 120 Askari ayaa Dowlada Syria looga dilay deegaanka,waxaana cabsi kasoo wajahday shacabka deegaankaasi arintaasi ay keentay in ay ka barakacaan guryahooda iyaga oo ka cabsi qaba in ay dowladu caro kula dhacdo.
Howlgalada ay Ciidamada Syria ka fuliyeen Jisr al-Shughour waxaa ay keentay in kumanaan qof ay isaga cararaan guryahooda,iyagoona ka gudbaya xadka ay wadaagaan Turkiga iyo Syria.
Qaramada Midoobay waxaa ay ka dayrisay xaalada Bini aadanimo ee haysata,kumanaan Syrian ah oo ku sugan xadka Syria iyo Turkiga,waxaana ay horay uga dalbatay Dowlada Syria in ay ogolaato in gargaar la gaarsiiyo dadka iyagana ku dhibaataysan deegaanada Waqooyi ee dalkaasi.
Hay ada xuquuqda aadanaha u qaabilsan Qaramada Midoobeey Human Rights Watch ayaa ku qiyaastay in ka badan 1110 qof dadkii ku dhintay dalkaasi tan iyo intii ay bilowdeen banaabaxyadii isbadal doonka ahaa ee dalkaasi Syria.